२५ वर्षअघि नै तौल बढे मृत्युको जोखिम
काठमाडौं, ८ असार । सरकारले साउन १ गतेदेखि यातायात समितिहरु नविकरण नगर्ने निर्णय गरे पनि ठूला यातायात समिति भने कम्पनीको रुपमा दर्ता हुन अझै अटेरी गरिरहेका छन् । गत वैशाखमा मन्त्रिपरिषदले असार मसान्तदेखि ...
काठमाडौं, ५ असार । प्रहरीभित्र लामो समयदेखि प्रहरी प्रधान कार्यालयमा बसेर आफू अनुकुलको निर्णय गराउँदै आएका प्रहरी कर्मचारीलाई प्रहरी मुख्यालयबाट बाहिर पठाउने अभियान शुरु भएको छ । प्रहरी महानिरीक्षक फेरिएपछि हरेक आईजीपीले घोषणा ...
काठमाडौं, ५ असार । नेपाल वायुसेवा निगमले विश्वसनीय रिक्रुटिङ मार्फत एकैचोटि पाँच दर्जनभन्दा धेरै पाइलट भर्ना गर्ने सार्वजनि प्रस्ताव गरेको छ । जसमा ४६ जना क्याप्टेन र १६ जना कोपाइलट (फस्र्ट अफिसर) ...
काठमाडौँ, ५ असार । गाउँका अधिकांश युवा कमाउन विदेश जाने क्रम बढेको बेला तानसेन १४ अर्गलीका निर्मल रानाले तकारी खेतीबाट डेढ लाख रुपियाँ आम्दानी गर्न सफल हुनुभएको छ । आफ्नै र भाडामा गरी ...
अरबी पात्रो हिजरी संवत्अनुसार दशौँ महिनाको पहिलो दिन शनिबार देशभरका मुसलमानले विशेष नमाज पाठ गरी ठूलोबडाबाट आशीर्वाद लिएर इद उल फित्र पर्व मनाउँदै छन् । शनिबार विशेष नमाज पाठ गरेपछि तीन ...
काठमाडौँ, २२ जेठ । भुकम्पबाट अति प्रभावित ४ जिल्लामा नेपाल टेलिकमले निःशुल्क ईन्टरनेट सेवा सुरु गरेको छ । टेलिकमले नेपाल दरसञ्चार प्राधिकरणसँग भएको समझौताअनुसार चार जिल्लाको ६ सय ७५ स्थानमा निःशुल्क ईन्टरनेट सेवा ...
काठमाडौं, १९ जेठ । सरकारले विद्यालय तहको शैक्षिक पाठ्यक्रममा आमूल परिवर्तन गरेको छ । मुलुक संघीय प्रणालीमा गएसँगै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले नेपालको संविधान, संघीय संरचना र समृद्ध नेपालको परिकल्पनाअनुकूल विद्यालय ...
काठमाडौँ, ६ जेठ । दक्षिण एसियाली मुलुकहरू नेपाल, भारत, बङ्गलादेश र भुटान अब यही आर्थिक वर्षभित्र सूचना राजमार्ग (एकीकृत अप्टिकल फाइबर सञ्जाल) मा जोडिने भएका छन् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका ...
भान्सा-भान्सामा ‘बम’जस्तै असुरक्षित ग्यास सिलिन्डर
काठमाडौं, ५ जेठ । अधिकांश ग्यास कम्पनीले असुरक्षित सिलिन्डरमा ग्यास भरेर बजारमा पठाउने गरेका छन् । भल्ब मर्मत गरिएका असुरक्षित सिलिन्डरमा ग्यास भरेर बजार पठाउने गरेको पाइएको नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल ...
नोकिया नाइन अहिलेसम्मकै उत्कृष्ट स्मार्टफोन !
नोकियाको बहुप्र्रतिक्षित नोकिया नाइन स्मार्टफोनका विषयमा लामो समेयदेखि विभिन्न खाले अनुमानहरु गरिँदै आएका छन् । यद्यपि कम्पनीले यो नामबाट कुनै स्मार्टफोन ल्याउने बारेमा आधिकारिक रुपमा केही बताएको छैन । अहिले यो ...
फेसबुक चलाउनुहोस् ,पैसा कमाउनुहोस ! पैसा कमाउने तरिका यस्ता छन् !
एजेन्सी ll फेसबुकबाट आफ्नो कुरा सेयर गर्ने, म्यासेज गर्ने मात्र होइन तरिका जाने पैसा पनि कमाउन सकिन्छ। फेसबुकले यसको लागि प्लेटफर्म बनाएको छ, अप्सन दिएको छ। प्रयोगकर्ता चाहे फेसबुकमै रहेर घर ...
आविष्कार केन्द्र बन्ला त् ? महाविरले सातामै ३७ लाख जुटाए
म्याग्दी ९,साउन म्यागासेसे पुरस्कार बिजेता महावीर पुनले सुरू गरेको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र बनाउने अभियानमा ३७ लाख भन्दा बढी रकम संकलन भएको छ । सरकारी मन्त्रालय र निकायमा पटक पटक धाउदा पनि आश्वासन बाहेक ...
अब फेसबुकमा ४५ भाषामा लेख्न सकिने
काठमाडौं । सामाजिक सञ्जाल फेसबुक प्रयोगकर्ताहरुले अब छिट्टै ४५ भाषामा लेख्न सक्ने भएका छन् । फेसबुकले एउटा यस्तो सफ्टवेयर विकास गरिरहेको छ, जसले फेसबुक प्रयोगकर्ताहरुले आफ्नो पोष्ट विभिन्न भाषामा अनुवाद गर्न सक्नेछन् ...
अब तपाईको आईफोन बोक्ने रहर पुरा हुने भयो, आयो सस्तो आइफोन
काठमाडौं । एप्पलले आजसम्मकै सबैभन्दा सस्तो आईफोन गएराति सार्वजनिक गरेको छ । एप्पलको मुख्यालयमा सार्वजनिक गरिएको सस्तो आइफोनलाई ‘आइफोन एसई’ नाम दिइएको छ । एप्पलका उत्पादनहरु मंहगो भएको साधारणको पहुचभन्दा बाहिर रहेको ...
सूचना–प्रविधिमा भारतीय एकाधिकार अन्त्य
दूरसञ्चार सेवाका लागि तारयुक्त प्रविधिबाट विश्व सन्जालमा जोडिन भारतको मात्रै भर पर्दै आएको नेपालले अब चिनियाँ बाटो प्रयोग गर्न सक्ने भएको छ । गत साता जमिनमार्गबाट चीनसँग अप्टिकल फाइबर जोडिएपछि नेपालको सूचना ...
३ मंसिर, काठमाडौं । बम विस्फोटमा परेर घाइते भएकालाई जिउँदै इँटाभ्टामा जलाउने नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वमन्त्री मोहम्मद आफताव आलमका पक्षमा वकालत गर्ने वरिष्ठ कानुन व्यवसायी शम्भु थापालाई कानुन व्यवसायीबाट हटाइदिन ...
नेपाल र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको बैठक सिक्ने र सिकाउने ऐतिहासिक अवसर
घटनाको भोलिपल्ट महराको एसएमएस ‘फर्गेट एस्टर्डे आई एम भेरी सरी’
काठमाडौं: बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालकको कार्यवधि दुई कार्यकालसम्म मात्र कायम रहने भएको छ । सरकारले सङ्घीय संसद्मा दर्ता गरेको ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३’ ९वाफिया० लाई संशोधन गर्न बनेको ...
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उपचारका लागि डेढ साता सिंगापुर बस्ने भएका छन्। मंगलबार बालुवाटारमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो स्वास्थ्यबारे जानकारी गराएका हुन्। ‘म स्वस्थ्य छु, बाहिर हल्ला गरे ...